1พงศ์กษัตริย์ 19 TNCV - 1 Ahemfo 19 AKCB
1อาหับทรงเล่าทุกสิ่งที่เอลียาห์ทำให้พระนางเยเซเบลฟัง และเล่าถึงการที่เอลียาห์ประหารผู้ทำนายของพระบาอัลทั้งหมดด้วยดาบ 2ดังนั้นเยเซเบลจึงส่งคนมาแจ้งเอลียาห์ว่า “ขอให้พระทั้งหลายจัดการกับเราอย่างสาหัส หากภายในพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ เรายังไม่ปลิดชีวิตเจ้าเหมือนที่เจ้าทำกับคนของเรา”
3เอลียาห์กลัว19:3 หรือเอลียาห์เห็นดังนั้นจึงหนีเอาชีวิตรอด เขาไปยังเบเออร์เชบาในยูดาห์ และทิ้งคนรับใช้ของเขาไว้ที่นั่น 4ส่วนเขาเองเดินทางเข้าไปในถิ่นกันดารแต่ลำพัง รอนแรมตลอดวัน แล้วเขาพบต้นซากต้นหนึ่ง จึงนั่งลงใต้ต้นซากนั้นและอธิษฐานให้ตัวเองตายเสีย เขากล่าวว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทนมามากพอแล้ว ขอทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเถิด ข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์” 5แล้วเขาก็นอนลงใต้ต้นซากและหลับไป
ทันใดนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องตัวเขาและบอกว่า “จงลุกขึ้นและรับประทานอาหาร” 6เอลียาห์มองไปรอบๆ และเห็นว่ามีขนมปังผิงอยู่บนก้อนหินร้อนๆ และมีน้ำเหยือกหนึ่งอยู่ข้างศีรษะ เขาจึงรับประทานขนมปัง ดื่มน้ำ แล้วล้มตัวลงนอนอีก
7ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาอีกครั้งหนึ่ง แตะต้องตัวเขาและบอกว่า “จงลุกขึ้นและรับประทานอาหารเพราะการเดินทางครั้งนี้เกินกำลังของท่าน” 8เอลียาห์จึงลุกขึ้นรับประทานและดื่ม ทำให้เขามีกำลังวังชาพอที่จะเดินทางเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนจนมาถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้า 9เขาเข้าไปพักแรมค้างคืนในถ้ำแห่งหนึ่งที่นั่น
10เอลียาห์ทูลตอบว่า “ข้าพระองค์กระตือรือร้นทุ่มเททำงานเพื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ชนอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ รื้อแท่นบูชาของพระองค์ สังหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์ด้วยคมดาบ เหลือข้าพระองค์เพียงคนเดียว และบัดนี้พวกเขากำลังพยายามฆ่าข้าพระองค์อีกด้วย”
11พระองค์ตรัสว่า “จงออกไปยืนต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าบนภูเขา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะเสด็จผ่าน”
แล้วมีลมพายุกล้าพัดปะทะภูเขาอย่างรุนแรง ทำให้หินแตกเป็นเสี่ยงๆ ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในลมนั้น หลังพายุก็เกิดแผ่นดินไหว แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในแผ่นดินไหวนั้น 12และภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟลุก แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในไฟนั้น หลังจากไฟมีเสียงกระซิบอันอ่อนโยน 13เมื่อเอลียาห์ได้ยิน เขาก็ยกเสื้อคลุมขึ้นปิดหน้า และออกไปยืนอยู่ตรงปากถ้ำ
14เขาทูลตอบว่า “ข้าพระองค์กระตือรือร้นทุ่มเททำงานเพื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ชนอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ รื้อแท่นบูชาของพระองค์ สังหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์ด้วยคมดาบ เหลือข้าพระองค์เพียงคนเดียว และบัดนี้พวกเขากำลังพยายามฆ่าข้าพระองค์อีกด้วย”
15องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงกลับไปตามทางที่เจ้ามา แล้วไปยังถิ่นกันดารแห่งดามัสกัส เมื่อเจ้าไปถึงที่นั่น จงเจิมตั้งฮาซาเอลให้เป็นกษัตริย์แห่งอารัม 16ทั้งเจิมตั้งเยฮูบุตรนิมชีให้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล แล้วเจิมตั้งเอลีชาบุตรชาฟัทจากอาเบลเมโหลาห์ให้เป็นผู้เผยพระวจนะสืบต่อจากเจ้า 17ผู้ใดหนีรอดจากคมดาบของฮาซาเอลจะถูกเยฮูฆ่า และผู้ใดหนีรอดจากคมดาบของเยฮูจะถูกเอลีชาฆ่า 18แต่เราจะเก็บรักษาคนเจ็ดพันคนที่ไม่ได้คุกเข่ากราบไหว้หรือจูบพระบาอัลไว้ในอิสราเอล”
19เอลียาห์จึงไปจากที่นั่น พบเอลีชาบุตรชาฟัทกำลังไถนา โดยมีวัวเทียมไถสิบสองคู่ เขาอยู่ที่ปลายแถวกับวัวคู่ที่สิบสอง เอลียาห์จึงตรงเข้าไปหาและเหวี่ยงเสื้อคลุมห่มให้เอลีชา 20เอลีชาปล่อยวัวไว้ตรงนั้นและวิ่งตามเอลียาห์ แล้วกล่าวว่า “ขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อน แล้วจะติดตามท่านไป”
21เอลีชาจึงกลับไปฆ่าวัว เอาเนื้อมาทำอาหาร ใช้คันไถทำเป็นฟืน และแจกจ่ายเนื้อให้คนทั้งหลายรับประทานกัน จากนั้นเอลีชาก็ติดตามเอลียาห์ไปในฐานะผู้ช่วยของเขา
TNCV : 1พงศ์กษัตริย์ 19
1 Ahemfo 19:1-21
Elia Guan Kɔ Bepɔw Sinai So
1Bere a Ahab duu fie no, ɔkaa nea Elia ayɛ nyinaa ne sɛnea wakunkum Baal adiyifo nyinaa no kyerɛɛ Isebel. 2Enti Isebel de saa nkra yi kɔmaa Elia se, “Sɛ ɔkyena sesɛɛ na minkum wo, sɛnea woakum nkurɔfo yi a, anyame no nkum me bi.”
3Elia tee nkra no, osuroe, enti oguan de peree ne ti. Ɔkɔɔ kurow bi a ɛwɔ Yuda a wɔfrɛ no Beer-Seba, gyaw ne somfo wɔ hɔ, 4na nʼankasa nantew da mu nyinaa kɔɔ sare so. Ɔkɔtenaa dutan bi a na ayɛ frɔmfrɔm ase, na ɔbɔɔ mpae sɛ anka onwu. Ɔkae se, “Nea mahu no ara dɔɔ me so, Awurade. Twa me nkwa so na minnye nsen mʼagyanom.”
5Na ɔdaa dua no ase.
Na ne nna mu no, ɔbɔfo bɛkaa no, ka kyerɛɛ no se, “Sɔre na didi.” 6Ɔhwɛɛ ne ho hyia huu brodo bi a wɔato no nnyansramma so, ne kuruwa a nsu wɔ mu. Enti odidii, nom nsu no, san daa bio.
7Na Awurade bɔfo no san baa bio bɛkaa no kae se, “Sɔre na didi pii ka ho, na ɔkwan a ɛda wʼanim no ware.” 8Enti ɔsɔre didi nomee. Aduan no maa no nyaa ahoɔden a ɔde betwa kwan adaduanan, awia ne anadwo akɔ Horeb19.8 Herob yɛ Sinai Bepɔw no din foforo a ɛhɔ na Onyankopɔn yii ne ho adi kyerɛɛ Mose. a ɛyɛ Onyankopɔn bepɔw no so. 9Okoduu ɔbodan bi ho, na ɔdaa mu anadwo no.
Awurade Kasa Kyerɛ Elia
Na Awurade bisaa no se, “Elia, dɛn na woreyɛ wɔ ha?”
10Elia buae se, “Mede ahoɔden asom Asafo Awurade Nyankopɔn. Nanso Israelfo abu apam a wɔne wo hyehyɛe no so, nam so abubu wʼafɔremuka nyinaa, akunkum wʼadiyifo a anka obiara. Me nko ara na maka, nanso wɔrehwehwɛ me akum me nso.”
11Awurade ka kyerɛɛ no se, “Fi adi kogyina mʼanim wɔ bepɔw no so.” Na bere a Elia gyina hɔ no, Awurade bɛfaa hɔ, na mframa dennen bi bɔ sii bepɔw no mu.
Na mframa no ano den no twitwaa abotan no mu. Nanso na Awurade nni mframa no mu. Mframa no akyi no, asase wosowee. Nanso na Awurade nni asasewosow no mu. 12Na asasewosow no akyi, ogya puei. Nanso na Awurade nni ogya no mu. Na ogya no akyi, nne bi a ɛyɛ bɔkɔɔ te sɛ nea wɔde ka asomsɛm bae. 13Elia tee nne no, ɔde nʼatade kataa nʼanim19.13 Elia kataa nʼanim, efisɛ obiara nhu Onyankopɔn mma onnya nkwa na ofi ɔbodan no mu, kogyinaa ano kwan no ano.
Na nne bi bisae se, “Elia, dɛn na woreyɛ wɔ ha?”
14Obuaa bio se, “Mede ahoɔden asom Asafo Awurade Nyankopɔn. Nanso Israelfo abu apam a wɔne wo hyehyɛe no so, nam so abubu wʼafɔremuka nyinaa, akunkum wʼadiyifo a anka obiara. Me nko ara na maka, nanso wɔrehwehwɛ me akum me nso.”
15Na Awurade ka kyerɛɛ no se, “San wʼakyi kɔ faako a wufi bae, na kɔ Damasko sare so. Na sɛ wudu hɔ a, sra Hasael ngo, si no Aramhene. 16Afei, sra Nimsi babarima Yehu, na ɔnyɛ Israelhene, na sra Safat babarima Elisa a ofi Abel-Mehola, na onsi wʼanan mu sɛ me diyifo. 17Obiara a obeguan afi Hasael ho no, Yehu bekum no, na obiara a obeguan afi Yehu ho nso no, Elisa bekum no. 18Eyinom akyi no, mɛbɔ nnipa afoforo mpem ason bi a wɔwɔ Israel a wɔnkotow Baal, mfew nʼano da, no ho ban.”
19Na Elia fii hɔ kɔ kohuu Safat babarima Elisa, na ɔde anantwi mpamho dumien refuntum afuw a nʼankasa reka mpamho a ɛto so dumien no. Elia kɔɔ ne nkyɛn kɔtow nʼatade guu ne so. 20Elisa gyaw anantwi no hɔ, tuu mmirika dii Elia akyi, ka kyerɛɛ no se, “Ma menkɔkra mʼagya ne me na ansa na me ne wo akɔ.”
Elia buae se, “San kɔ. Dɛn na mayɛ wo?”
21Afei, Elisa san kɔɔ anantwi no ho kokunkum wɔn. Ɔde funtumfiri no ho nnua no yɛɛ nnyansin de noaa nam no de maa mmarima no ma wɔwee. Afei ɔkɔ kodii Elia akyi ma ɔbɛyɛɛ ne somfo.
AKCB : 1 Ahemfo 19